समाचार Archives - Filmy Hotline
काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सीमा सुरक्षाका लागि गठन गरेको अर्धसैनिक प्रकृतिको सशस्त्र प्रहरी बलको मर्म र भावनाविपरीत वर्तमान आइजीपी शैलेन्द्र खनालले काम गरिरहेको आरोप छ । उनले सीमा सुरक्षाका लागि गठन गरिएको सशस्त्रको संख्या २ नं प्रदेशका ८ जिल्लाबाट घटाएर पहाडतिर थुपारेका छन् । साँघु साप्ताहिकले समाचार छापेकाे छ । सीमा सुरक्षाका लागि गठन गरिएको सशस्त्रको मनोबल कमजोर बनाउन विगतमा लोकमानसिंह कार्कीलाई जुन शक्तिले प्रयोग गरी एकैपटक बहालवाला र पूर्व गरी ४ आइजीपी बिरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न लगाएको थियो, अहिले त्यही शक्तिले २ नम्बर प्रदेशमा सशस्त्रको दरबन्दी कटौती गर्न आइजीपी खनाललाई प्रयोग गरेको आँकलन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सचिवलाई समेत गुमराहमा राखी उनले २ नम्बर प्रदेशमा संख्या कटौती गरेका छन् । २ नम्बर प्रदेशमा बोर्डर आउटपोष्ट र विगतका सी
एक सातायता बढेको तापक्रमले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभरको जनजीवनमा असर पुगेको छ । तराईका साथै पहाडी जिल्लामा समेत तापक्रम वृद्धि भएको छ । गर्मी बढेसँगै तराईका विभिन्न जिल्लामा विद्यालयले केही दिनकमा लागि बिदासमेत दिएका छन् । काठमाडौँमा शुक्रबार यस वर्षकै सबैभन्दा बढी गर्मी महसुस भयो । शुक्रबार काठमाडौँमा ३३.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम पुगेको थियो । शनिबार नेपालगञ्जमा अधिकतम तापक्रम ४३ डिग्री पुगेको थियो । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले देशैभरको तापक्रम नबढ्ने जनाएको छ । आइबार दिउँसोदेखि स्थानीय वायुसँगै पश्चिमी वायुको प्रभाव बढेपछि थप गर्मी नबढ्ने जल तथा मौसम विज्ञान विभाग पूर्वानुमान महाशाखाको भनाइ छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा वीरेन्द्र ओलीले लेखेका छन् ।
२०७६ जेठ ३२ गते आम रुपमा एउटा रुखमा एउटा खालको मात्र फल लाग्दछ । तर यस्तो हुनैपर्दछ भन्ने कहाँ छ र ? दुनियाँमा एउटा यस्तो ठाउँ छ जहाँ एउटै रुखमा ४० प्रकारका फल फल्दछन् । यो पत्याउन गाह्रो हुन्छ, तर यथार्थ हो । अमेरिकामा एक भिजुअल आर्टस्का प्राध्यापकले त्यस्तो अद्भूत रुख तयार गरेका छन् । त्यसमा ४० प्रकारका फल फल्दछन् । उक्त रुखको नाम ट्री अफ ४० फ्रुट्स हो । यस रुखमा एप्रिकोट, चेरी, आरु, आलुबखडालगायतका फल फल्दछन् । यो रुखको मूल्य त झन होसै उडाउने जति छ । किनकि यो एएटा रुखको मूल्य ३० हजार डलर पर्दछ । अमेरिकाको सेराक्यूज विश्वविद्यालयका भिजुअल आर्टस्का प्राध्यापक स्याम वान ऐकेन यस अनौठो रुखका सर्जक हुन् । यो रुखको सिर्जना गर्नका लागि उनले विज्ञानको सहारा लिएका छन् । सन् २००८ मा उनले यस कामको सुरु गरेका थिए । प्राध्यापक वान किसान परिवारमै जन्मिएका व्यक्ति हुन् । उनले न्युयोर्कको एउटा बन्
जेठ २६, २०७६, काठमाडौँ – दुई साता अघि युट्युबमार्फत सार्वजनिक ‘गलबन्दी’ बोलको गीत अहिले चर्चामा छ । पछिल्लो ६ दिनदेखि लगातार युट्युब ट्रेन्डिङको पहिलो नम्बरमा रहेको गीतलाई यो समाचार तयार पार्दासम्म ८८ लाखभन्दा धेरैपटक हेरिसकिएको छ । जे चिजको धेरै चर्चा हुन्छ, त्यसको सकारात्मक र नकारात्मक पाटो बाहिरिनु स्वभाविक मानिन्छ । यस्तै भएको छ प्रकाश सपुतको अहिले बाहिर आएको गीत ‘गलबन्दी’को पनि । मौलिकपन झल्कने भनी व्यापक चर्चा पाएको गीतलाई अहिले चोरीको भन्न थालिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा गीत चोरी भएको भन्दै प्रकाश सपुतको चर्चा सँगसँगै आलोचना पनि हुन थालेको छ । गीतको लय, शब्द, भिडियो र प्रकाश सपुत स्वयंले व्यापक चर्चा पाइरहँदा सामाजिक सञ्जालमा उनलाई गीत चोरेको आरोप लाग्न थालेको छ । शम्भु राईको गीतबाट शम्भु राईको गीत चोरी भयो भन्ने हल्ला चल्न थालेपछि हामील पनि शम्भु राईका पुराना गीतहरुको खोजी
भक्तपुरमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु सात साय युवालाई रोजगारी
२५ जेठ २०७६, काठमाडौं : पहिलो पटक भक्तपुरमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको छ। भक्तपुरका चारैवटा नगरपालिकाको संयुक्त आयोजना भएको कार्यक्रममा प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यक्रम सुरु गरेका हुन्। कार्यक्रमबाट पहिलो चरणमा भक्तपुरका तीनवटा नगरपालिकाका करिब ७ सय बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिइएको बताइएको छ। जिल्लामा १ हजार ५ सय युवाहरुले बेरोजारको सूचिमा नाम दर्ता गराएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यक्रमको सुरुवात गर्दै सूवर्ण चोकदेखि तीनधारा जाने सडक निर्माणको लागि कार्यक्रमसँग आबद्ध युवाहरुलाई निर्माण उपकरण प्रदान गरेका थिए।
जेठ २४, काठमाण्डौ – अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिन युवाहरुले चासो नदिएको बताउनुभएको छ ।चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भएको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सहुलियत ब्याजमा ऋण लिने योजना प्रभावकारी नभएको सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकार ऋण दिन तयार भए पनि ऋण लिनेहरु तयार नभएको बताउनुभयो । ‘हामीले सुहलियतमा ऋण दिने भनेकै हो, दिनेहरु तयार छन् तर लिन तयार भएनन, ऋण लिन्छु भन्दा बैंकले दिएनन भने गुनासो सुनुवाइ हुन्छ तर हामीसँग गुनासो आएको छैन’, उहाँले भन्नुभयो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा सात लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख थियो । सरकारले बजेटमै योजना राखेपछि धेरै युवाहरु उत्साहित भएका थिए । तर ब
जेठ २४, काठमाडौं । सरकराले आइतबार काठमाडौंम सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । गृहमन्त्रालयले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर् आइतबार अर्थात जेठ २६ गते रातो मच्छिन्द्रनाथको भोटो देखाउने जात्रा परेको उक्त दिन काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनि बिदा दिने जनाएको छ ।
जीवित देवी कुमारीको दर्शन गर्न भ्याइनभ्याइ
दिपक केसी जेठ २४,काठमाडौं : वर्षा र सहकालका देवता रातो मछिन्द्रनाथ रथयात्राका क्रममा बिहीबार ललितपुरमा जीवित देवी कुमारीको दर्शनका लागि भक्तजनको ओइरो लाग्यो। बैशाख शुक्ल पक्ष प्रतिपदादेखि सुरू भएको रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्राको अवसरमा ललितपुरको कुमारीपाटीमा जीवित देवी कुमारीलाई भक्तजनको दर्शनका लागि राखिएको हो। त्यसक्रममा कुमारीको दर्शन र आशिर्वाद लिनेहरुको घुँइचो लागेको थियो। करिब एक हजार ६०० वर्ष रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा वैशाख शुक्ल पक्ष प्रतिपदादेखि असार शुक्ल चौथीसम्म दुई महिना मनाइन्छ । यो जात्राको विशिष्ट सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व रहेको संस्कृतिविद बताउँछन् । पाटनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र उपत्यकाको सबैभन्दा लामो यो जात्राका क्रममा जीवित देवी कुमारीलाई हख बहालको मूलढोकामा राखिन्छ । मच्छिन्द्रनाथको सम्पूर्ण जात्रालाई जीवित देवीका रूपमा लिइने कुमारीले पनि अवलोकन गर
गोपीकृष्ण ढुंगाना २३ जेठ काठमाडौं : पशुपतिनाथ मन्दिरमा नौ किलो सुन रहेको पाइएको छ। २०१९ सालदेखि २०७५ सालसम्ममा भक्तजनले चढाएको सुन नौ किलो २७६.६४ ग्राम पुगेको हो।श्रीपशुपतिनाथको सम्पत्ति संरक्षण तथा गुठी जग्गा अध्ययन तथा छानविन समितिको प्रतिवेदनले नौ किलो २७६.६४ ग्राम सुनसँगै तीन सय १६ किलो ५८६ ग्राम चाँदी रहेको खोजी गरेको हो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बुधबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। समितिका संयोजक एवं कोषका कोषाध्यक्ष डा. मिलनकुमार थापाले श्रीपशुपतिनाथको मूल ढुकुटीमा रहेको अभिलेखलाई आधार बनाएर खोजी गर्दा नौ किलो सुन र तीन सय १६ किलो चाँदी पशुपतिनाथको नाममा रहेको जायजेथा फेला परेको जानकारी दिए।
रसुवा । रसुवाको मैलुङ–स्याफ्रुबेसी सडकखण्डमा टाटासुमो दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । अन्य तीन जना बेपत्ता भएका छन् । पोखराबाट रसुवाको गोल्जुङ जाँदै गरेको बा. १० च ५८२० नम्बरको टाटा सुमो हिजो साँझ कालिका गाउँपालिका–१ गुम्चेतमा दुर्घटना भएको हो । मृत्यु हुनेहरुमा गोल्जुङका ३२ वर्षीय नुर्बु तामाङ, ३२ वर्षीया साँईली घले र ३५ वर्षीय मेन्दो घले छन् । टाटासुमो सडकबाट करिब डेढ सय मिटर तल त्रिशुली नदीमा खसेको थियोे । जीपमा सवार ११ जनामध्ये अन्य तीन जना नदीमा वेपत्ता भएको बताइएको छ । सेना र प्रहरीको टोलीले बेपत्ता भएकाहरुको खोजी गरिरहे पनि फेला पार्न सकेको छैन । दुर्घटनामा घाइते भएका ५ जनामध्ये तीन जनालाई उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइएको छ भने दुई जनाको नुवाकोटमा उपचार भइरहेको छ ।